Fariinta Dowladda Mareykanka sida tooska ah ugu dirtay Farmaajo iyo Rooble, kadib Beesha Caalamka - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Dowladda Mareykanka ayaa baaq toos ah u dirtay Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday iyo Ra’iisal wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya.
Farriintan oo timid kadib warkii Beesha Caalamka xalay kasoo saartay khilaafka Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Maxamed Rooble Xuseen Roble ayaa si toos ah loogu diray labada mas’uul, iyadoo loogu sheegay inay dhammeeyaan khilaafkooda, ayna sida ugu dhaqsiyaha badan u jeestaan dhammeystirka Doorashada.
Farriinta ayaa ka timid Waaxda Arrimaha dibadda Mareykanka, waxayna u qorneyd sida sooo socota: “Waxaan ku boorineynaa Farmaajo iyo Rooble inay khilaafkooda ku xaliyaan si nabad ah, ayna xoogga saaraan sidii dib u dhac la’aan loogu dhammeystiri lahaa Doorashada. Doorashadu waxay muhiim u tahay nabadda iyo xasiloonida xilliga xog ee Soomaaliya iyo horumarka”
Dowladda Mareykanka waxay ka mid ahayd dalalka Beesha Caalamka ee war-saxaafadeedka kasoo saaray khilaafka Farmaajo iyo Rooble, laakiin waxay saameyn gaara ku leedahay arrimaha Soomaaliya.
Previous articleXOG: Kursiga Aqalka Sare ee Ganacsadaha looga haray, ayna ka cararreen Musharixiintii la tartami lahaa!
Next articleFahad Yaasin oo ka haray Diyaaradda Turkish Airlines ee maanta Muqdisho timid iyo Dib usoo laabashadiisa oo…